एमएडब्लुले सार्वजनिक गर्यो फोटोनकाे दुई नयाँ गाडी, कुनको मूल्य कति ? – BikashNews
एमएडब्लुले सार्वजनिक गर्यो फोटोनकाे दुई नयाँ गाडी, कुनको मूल्य कति ?
२०७७ भदौ २९ गते १९:०८ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपालका लागि फोटोन मोटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धि कमर्शियल भेहिकल प्रा. लि.ले दुई नयाँ गाडी सार्वजनिक गरेको छ । एमएडब्लुले नेपाली बजारका लागि आफ्नो दोस्रो पिकअप टुनल्यान्ड ई र दोस्रो भ्यान भ्यु सीएस२एल सार्वजनिक गरेको हो ।
विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको ब्रान्ड
सन् १९९६ मा स्थापना भएयता ९६ लाख थान गाडी विक्री गरिसकेको फोटोनको ब्रान्ड भ्यालु अहिले २३ अर्ब ४ करोड डलर रहेको छ । फोटोन मोटरमा बीआईएसी र डेमलरको ५०-५० प्रतिशत साझेदारी रहेको छ । साथै, संसारको नं १ ट्रान्समिसन सिस्टम निर्माता जर्मन कम्पनी जेडएफ र संसारको नं १ इन्जिन निर्माता अमेरिकी कम्पनी कमिन्ससँग पनि फोटोनको साझेदारी छ ।